Shil gaari oo sababay dhimashada 3 ruux oo ka dhacay duleedka Jowhar | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Shil gaari oo sababay dhimashada 3 ruux oo ka dhacay duleedka Jowhar
Shil gaari oo sababay dhimashada 3 ruux oo ka dhacay duleedka Jowhar
Wararka laga helayo tuulada Garaash, oo qiyaastii 4-KM dhanka Koonfureed kaga beegan magaalada Jowhar ayaa waxaa ay sheegayaan in galinkii dambe maanta uu ka dhacay shil gaari oo ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah.
Shilkan ayaa yimid kadib makii sida la sheegay ay isku dhaceen Gaari noociisa lagu sheegay NOAH, iyo Mootada loo yaqaano Bajaaj, kuwaasi oo ku socday xawaare sare sida uu sheegay maamulka degmada Jowhar.
Maxamed Cabdi Sheekh, guddoomiye ku xigeenka Arrimaha Siyaasada ee degmada Jowhar ayaa sheegay in shilkan ay ku dhinteen Saddex qof oo 2 ka mid ah la sheegay inay ahaayeen Dumar.
Shirkan qasaaraha nafeed dhaliyay ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 4 qof oo kale.
Dadkii ku dhaawacmay shilkan gaari ayaa waxaa lagu soo waramayaa in la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Jowhar oo xarun u ah gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dhanka kale taliyaha saldhigga degmada Jowhar Maxamed Siyaad Canjeex, ayaa Ciidamada ilaalada wadooyinka ku amray in ay talaabo sharci ah ka qaadaan gaadiidleyda sida qaldan wadada u isticmaasha iyo kuwa gawaarida sida xawli uu ku jiro u wada.
Shilka ayaa waxaa ku dhintey allaha u naxariistee Marxuum Xaaji Cabdulle Xasan Madaxdheelshe oo ka mid ahaa waxgaradka caanka ka ah magaalada Jowhar. Waxana uu aabe u ahaa webmasterka Soomaalidamaanta.com Maxamed Cabdulle Xasan Siidii. Bahda shabakada warbaahinta jowhar.com waxa ay tacsi u direysaa qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday Marxuum Xaaji Cabdulle Xasan gaar ahaan Siid Maxamed Cabdulle Xasan, sida ay ku waramayso warbaahinta gobalka.
Previous articleAkhriso: Qodobadii Baarlamaanka Soomaaliya maanta uu ka hadlay
Next articleMadaxwaynaha Turkiga oo la kulmay Ilhaan Cumar (Sawiro)